६ कारणहरु, जसले हामीलाई रोगी बनाउँछ !! | सुदुरपश्चिम खबर
६ कारणहरु, जसले हामीलाई रोगी बनाउँछ !!
धेरैजसो अवस्थामा चाहि रोग लाग्नु वा नलाग्नुमा हामी स्वयम् जिम्मेवार हुन्छौं । हामीले अपनाउने दिनचर्या, हामीले खाने खानेकुरा, हामीले लिने सोंच–विचार आदि यसको कारण बन्छ । जस्तो राती अबेरसम्म बस्ने, कुनैपनि शारीरिक गतिविधि नगर्ने, मसलेदार वा मीठो–मसिनो मात्र खाने, मदिरा सेवन गर्ने, ऐश–आरम मात्र खोज्ने, अनावश्यक चिन्ता लिने । यस्ता जीवनशैलीले हामीलाई निरोगी र तन्दुरुस्त राख्दैन ।
हामी ऐश–आरममा रमाउन चाहन्छौं । हामी सुविधाभोगी भएका छौं । मीठो मसिनो खाने, मनोरञ्जन गर्ने, मस्त बस्ने–सुत्ने । तर, शारीरिक गतिविधि नगर्ने । सकेसम्म आफ्नो स–सना काम पनि अरुलाई गर्न लगाउँछौं । खाना पस्कने, भाँडा माझ्ने, कुचो लगाउने, लुगाफाटो मिलाउने, जुत्ता पोलिस गर्ने जस्ता काम आफुले गर्नै नपरोस् भन्ने चाहन्छौं । न कुनै श्रम गर्छौं, न व्यायाम । योग, ध्यान, व्यायाम गर्न जागर चल्दैन । यही कारण हाम्रो शरीर रोगी र जीर्ण हुँदैछ । अनलाइनखबर बाट सभार